ਮਿਣਤੀ: ਟਰੋਜਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ?
Nangalatra mihoatra ny 12 miliara dolara ny mpitsikera an-tserasera, ary tapa-kevitra ny hangalatra foana izy ireo. Hitan'izy ireo fa ny zokiolona no tena lasibatra indrindra. Misy fomba sasany ampiasain'izy ireo.
Manazava ny fomba hisorohana ny fanafihana malware amin'ny loza i Michael Brown, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt .
Rehefa mandehandeha ianao, dia afaka mahita ny dokam-barotra milaza aminao fa hahazo zavatra maimaim-poana ianao. Mety ho burger maimaim-poana izany, ary tena noana ianao. Aza mianjera amin'izany. Raha tsindrio ny ad na rohy, dia manokatra pejy iray izay mameno ny malware amin'ny solosainao na manamboatra angona manokana.
Amin'ny lafiny sasany, ny pejy dia hanolotra anao amin'ny endrika iray mba hamenoana. Hampiasa hackers ny fampahalalam-baovao.
Aza kitihana ireny dokam-barotra ireny. Hamarino raha marina ireo tolotra ireo amin'ny fikarohana ao amin'ny Google, mandeha amin'ny tranonkala ara-dalàna na fanamarinana tranonkala toy ny Snopes.
2. Famonoana mpirenireny
7) Ny sasany mijery ny olona misaona, mananotena indrindra. Namaky ny pejy tsy fahita izy ireo ary mahita ny fifandraisana akaiky indrindra amin'ny maty. Ny sakaiza dia mendrika ny miasa ao amin'ny banky ary miantso ny havany akaiky. Ny mahazo azy dia mahazo ny mombamomba azy amin'ny alàlan'ity fanovana ity. Amin'io fampahalalam-baovao io, dia manimba ireo nidonam-pahoriana ny valala.
Raha toa ka ao anatin'ny toe-javatra toy izany, dia aza misoroka olana ara-bola raha toa ianao ka marefo ary mpitsikilo mivoaka any no mikendry anao. Araho tsara ny fiantsoana sy ny mailaka rehefa misaona ianao.
Mangataka anao ry zareo hanodina avy hatrany ny vola amin'ny kaonty manokana, na hosamborina ianao ary hosaziana. Mba hisintonana izany, ireo mpampihomehy dia afaka mampiasa fampahalalana tsiambaratelo toy ny tambazotra fiahiana ara-tsosialy mba hanosika anao hino fa izy ireo dia tena miasa amin'ny IRS. Ny fomba hafa tsy ampiasaina dia ny filazana fa ny IRS dia hamerina anao vola bebe kokoa aorian'ny hanomezanao azy manokana fampahalalana ho an'ilay mpanangona.
Ny IRS dia matetika mifandray amin'ny serivisy ary raha mahazo antso ianao dia afaka manamarina raha tena marina izany amin'ny fiantsoana 800-829-1040 izay ny laharana finday IRS.
4. Ny fahasalamana ara-pahasalamana
Ny tarehimarika momba ny fiahiana ara-tsosialy ihany koa dia manondro ny laharana Medicare anao sy ny mpitsikera izay mikendry ireo vaovao ireo ary vetivety dia mety hahita fiampangana tsy noraisinao.
Arovy ny isa, tehirizo miafina. Raha mahatsikaritra zavatra tsy fantatra ianao, dia lazao avy hatrany ny fahasalamanao ara-pahasalamana. Ireo mpampihorohoro dia afaka mahazo ny fampahalalam-baovao sosialy amin'ny alàlan'ny phishing. Matetika izy ireo no mitaky ny hiantso any amin'ny Marketplace momba ny fahasalamana ara-pahasalamana Ireo masoivohom-panjakana dia tsy mangatsiaka ary mangataka ny mombamomba azy manokana. Raha mahita mpitolona iray mangataka ny mombamomba anao manokana ianao dia atsangano.
5. Ny antso mangina
Mety hikorontana eo amin'ny fandrianao ianao ary hankafy ny fampisehoana ankafizinao indrindra rehefa miantso ny telefaona. Maka anao ary miteny hoe "Hello." Tsy misy mamaly. Ity dia antso an-tariby robot, maniry ny hanamarina ny tanjona mety. Azonao atao ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ID mpamoaka. Aza koa mamaly antso tsy voamarina. Ny mpihaino iray dia matetika mamela hafatra amin'ny valin-kevinao.
6. Fifanakalozam-baovao tsy miankina
Na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra vitanao mba hitazonana ny mombamomba anao amim-pahamalinana amin'ireo mpitsikilo mpampihorohoro, dia azony atao ny mahazo ny antsipiriany avy aminao:
Ny orinasa tsy mivaona izay mivarotra ny mpanjifany fampahalalam-baovao
Ireo mpitsikilo hafa izay efa nanandrana na nahomby na tsy nahomby tamin'ny famonoana anao
Fanitsakitsahana hosoka sy fanadihadiana izay tokony hamenoanao ny antsipiriany.
Ireo rehetra ireo dia ivon-toeram-ponenana ho an'ny mpitsikilo. Aoka ho mailo ianao.